Si u samaysid sidaan, waxaa baahan yahay inaad cuntid cunto caafimaad leh iyo inaad si joogto ah u jimicsi that is samaysid. Inkastoo oo halis keeni karo, haddii aad qabtid neef aad u xun, waa inaad qaadatid tallal sanadeedka ifilada (durayga). Waa inaad xitta qaadataa tallaalka ka hortagga pneumococcal - oo oh jeermis keena xanuunka sambabaha (pneumonia), meningitis iyo bukashada dhiigga.
Qayb ka mid ah neeftaada waa ogaashada waxyaabaha kicin iyo in dayo in laga fogaado. Tijaabada PEFR waxaa lagu isticmaalaa qalab yar ee gacanta lagu qabto ee lagu magacaabo cabbiraha neef-baxsiga ugu dheer (peak flow meter) oo cabbiraayo inta ay tahay hawada aad ka saari karto sambabahaaga. Waxaa la akhrin doonaa natijada miisaanka jirka tijaabada kadibna waxaa lagu daawo oo neefta wax- tar u leh waqti gaaban. Waxaa ka soo boodidda neefta lagu daawayn karaa oo la xisaabta laga beta2 -agonists.